Xuska dhalashada Nabigeena Muxamed (NNKH) oo lagu qabtay Guriceel – Radio Muqdisho
Xuska dhalashada Nabigeena Muxamed (NNKH) oo lagu qabtay Guriceel
Munaasabad lagu weyneynayay dhalashada Nabigeena Muxamed (NNKH) oo ay ka qeyb galeen culimaa’udiin iyo dadweyne aad u fara badan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Guriceel oo gobolka Galgaduud.
Xafladda oo ay soo qaban qaabiyeen bahda waxbarashada ee Gobolka Galgaduud, waxaana culimadii ka qeyb gashay ay ka sheekeeyeen taariikhda dhalashada Nabiga.
Sheekh Saciid Muxumed Cabdiraxmaan Madaxa Garsoorka Culimaa’udiinka Ahluna Waljamaaca oo ugu dambeyntii munaasabadda hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay in xafladdu ay tahay mid lagu weyneynayo dhalashada Nabigeena Muxamed (NNKH), isla markaana bulshada lagu fahamsiinayo ahmiyadda ay bishan oo kale u leedahay Ummadda Muslimiinta ah.
Sheekha ayaa sanadkan kiisa kale u rajeeyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan in ay ku gaaraan horumar iyo baraare, ayna u istaagaan weynneynta dhalashada Nabigeena Muxamed (NNKH).
Gool haye Victor Valdes oo Ku Biiray Kooxda Manchester United